လျှိုဝှတ်ဥယျာဉ်: ရာဇာမင်းမှန်လုံယာဉ် အရှိန်လွန် အမြန်လမ်းပေါ်မှ ရထားလမ်းပေါ် ထိုးကျတိမ်းမှောက်၍ ခရီးသည် ၁၄ ဦးသေဆုံး
ရာဇာမင်းမှန်လုံယာဉ် အရှိန်လွန် အမြန်လမ်းပေါ်မှ ရထားလမ်းပေါ် ထိုးကျတိမ်းမှောက်၍ ခရီးသည် ၁၄ ဦးသေဆုံး
ဖြစ်စဉ်မှာ ယနေ့ညနေ ၆ နာရီ၄၅ မိနစ်က
နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သို့ ယာဉ်မောင်း မင်းခန့်
(ခ) ထွန်းခန့်စိုး(၃၄နှစ်) မဟာစည်ရိပ်သာ အနောက်
မောင်းနှင်သော ရာဇာမင်း ခရီးသည်တင်
မှန်လုံယာဉ်သည် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၉၇/၆ ကို စတင် တိုက်မိပြီး ဝက်လက်မီးရထားခုံးကျော် တံတားထိပ်ကို ထပ်မံတိုက်မိကာ တံတားအောက်သို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်ခဲ့သည်။
ယာဉ်ပေါ်၌ ယာဉ်မောင်း နှစ်ဦး၊ယာဉ်နောက်လိုက် တစ်ဦး၊ ခရီးသည်အမျိုးသား ၂၃ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၀ဦး စုစုပေါင်း ၄၆ ဦးပါရှိသည့်အနက်အမျိုးသား ၁၀ ဦး၊အမျိုးသမီး လေးဦးပေါင်း ၁၄ ဦးသေဆုံးပြီး နေပြည်တော် ခုတင်(၁၀၀၀) ဆေးရုံကြီး၌အမျိုးသား ၁၅ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၁ဦး၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌အမျိုးသား နှစ်ဦး၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးစုစုပေါင်း အမျိုးသား ၁၇ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂ ဦး ပေါင်း ၂၉ ဦး ဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိခဲ့ပြီး ဆေးဝါးကုသမှုခံယူလျက်ရှိသည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ရာဇာမင်းခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်မှာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး မိုင်တိုင်တစ်ခု၊ တံတားထိပ်ပိတ်လက်ရန်း၁၀ ပေခန့်နှင့် ဘာရီယာတုံး ၁၀ တုံးတို့ ပျက်စီးခဲ့သည်။
အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်မှ တပ်မတော်သားများ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရွာသူရွာသားများရောက်ရှိလာပြီး သေဆုံးသူ အလောင်းများအား လမ်းမပေါ်သို့ သယ်ဆောင်၍ လူနာတင် ယာဉ်ပေါ်သို့ တင်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရရှိသူများအားဝိုင်းဝန်းကူညီသယ်ဆောင်၍ လူနာတင် ယာဉ်ပေါ်သို့ တင်ဆောင်ပေးခြင်း၊သေဆုံးသူအလောင်းများနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများအား အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များက တပ်ဖွဲ့ပိုင်ယာဉ်များဖြင့်နေပြည်တော် ခုတင် (၁၀၀၀) ဆေးရုံနှင့် လယ်ဝေးပြည်သူ့ ဆေးရုံတို့သို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ရာဇာမင်းခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်မှ ယာဉ်မောင်း မင်းခန့်(ခ)ထွန်းခန့်စိုးမှာ ဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် နေပြည်တော် ခုတင် (၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက် ကုသမှုခံယူလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါယာဉ်တိမ်း မှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပလွေးအမြန်လမ်းရဲစခန်းက ယာဉ်(ပ) ၁၂/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄-က/၃၃၈/ ၃၃၇/၂၇၉ အရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားရှိကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။
ရေးသားသူ hlyothwetuyin ဘယ်နေ့က 5/12/2014 11:01:00 pm
သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အခြေခံစည်းမျဉ်းများ ပြင်ဆင်ရန် ပဉ္စ...
မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး လူသေဆုံးမှုများနေ၍ မိုးတိမ်တောင...
ဌာနပိုင်မြေမှာ ကွန်ဒိုဆောက်မှု လွှတ်တော်အမတ် ဆန္ဒပြ
မေလ (၁၂) ရက်နေ့ ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(...
စစ်တပ်ကို ဦးစားပေးတဲ့ ပုဒ်မများ ပြင်ပေးဖို့ ဆန္ဒြ...
မတ္တရာ တပ်သိမ်းမြေ ကိစ္စ ညှိနှိုင်းမယ်
မန်စီးတီး ချန်ပီယံ ဖလား ဆွတ်ခူး
ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းပေးဖို့ စက်မှုဇုန် လုပ်သားများ ဆ...
အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်ြးေ...
အရေပြားဆဲလ်မှ သုက်ပိုးဆဲလ်သို့ ပြောင်းလဲသည့် နည်းပ...
ဆိုင်ကယ်တိမ်းမှောက်၍ သတိလစ်နေစဉ် ဆိုင်ကယ်အခိုးခံရ
အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကြေညာစ...
မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် နုတ်ထွက်ပေးရန် စာရေးသား ဆန...
သမ၀ါယမအသင်းစုမြေနေရာတွင် ကွန်ဒိုမီနီယမ် ဆောက်လုပ်သ...
အမွေကိစ္စစကားများရာမှ ညီမလက်ချက် ဖြင့် အစ်မသေ
ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီနှင့် ငှားရမ်းသူများအဖွဲ့လိုက် ရန်ဖြစ...
လမ်းပြောင်းပြန်နှင့် မီးနီ ဖြတ်မောင်းသူများကို ယာ...
လေဘေးသင့် ဒေသခံများ ဆန်နှင့်ဆီမှအပ အခြားထောက်ပံ့မှု...
ဒီလို လူ (၁၀)မျိူးကိုတွေ့ခဲ့ရင် တန်ဖိုးထားပါ==
သဘာဝတရားကို သိစွမ်းနိုင်တဲ့ ပညာဆိုတာ။
''မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီသော ဖက်ဒရယ်စနစ် ကျင့်သံ...
ယင်းလပ်ရှင်နာဝပ် ထောက်ခံဆန္ဒပြသူတွေ အင်အားသုံးလူစုခ...
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးနှင့် နေပြည်တော် မြို့တော်ဝန် ဦးသ...
မပုပ်မသိုးဘဲ ရှိနေသေးသော ဘန္တ၀ဏ္ဏသာမိ မဟာထေရ်မြတ်ကြီ...
မြစ်ဆုံအနီး အရပ်သား ၃၂ ဦးကို ကေအိုင်အေ ဖမ်းဆီး
အစိုးရ နှုတ်ထွက်ပေးရေး စာရွက်ဝေငှသူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆ...
မေလ (၁၁) ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်သတင်းစာ
Yingluck ထောက်ခံဆန္ဒပြသူတွေ အင်အားသုံးလူစုခွဲခံရ
ဘန်ကောက်မြို့တွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေ အစိုးရအ...
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နိုင်ငံရေး ပါတီ ၆၅ ခုနဲ့ တွေ...
အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲ ရေပိုင်နက်အငြင်းပွားမှု အရေးပါ
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေး အာဆီယံ ဝန်ကြီးတွေ စိုးရိမ်
ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်တွေ ဥပဒေလေးစား လိုက်နာကြဖို...
The Voice Weekly Vol.10/No.17
အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီး၏ နိုင်ငံအနောက်တံခါးအတွက် ...
*** ချစ်ခြင်းသက်သေ ***
တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ပါသလား? တိုင်းပြည်တကယ်တိုးတက...
မိဘက သားသမီးကို၊ ဆရာက တပည့်ကို၊ ဆဲဆူဆုံးမတာဟာ ဖရုသ...
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဘက်မလိုက်သော ၀ါဒ
K pop group ရဲ့ပုံရိပ်လေးများ
တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါး ကောက်ယူနိုင်ခဲ့သည့် (၂၀၁၄)ခုန...
အခြားလူမျိုးနှင့် ဘာသာများကို နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးမ...
လူမဆန်သည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းက ဘုရင့်နိုင်ငံ၏ ကြမ်...
ဆုပန်ထွာက ကြေးမုံသတင်းစာကနေ သတိပေးပြီ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆ...
အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆန့်ကျင်ရေး ၉၇ ဖွဲ့ကို အမျိုးသားသ...
ရွှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန်မှာ အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေ ဆန္ဒပြ
သန်လျင်မြို့နယ်တွင် လေပြင်းတိုက်မှုကြောင့် အခြေခံပည...
ကုသိုလ်တော် ဘုရားဝင်း ကျောက်စာများကို ကမ္ဘာ့အမွေအ...
ထိုင်းမှာ ရာချီ ဆန္ဒပြ၊ ရဲက ဖြိုခွင်း
မေလ ၉ ရက်၊ သောကြာနေ့ ညနေခင်း Planet Evening
မေလ (၁၀) ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်သတင်းစာ
မေလ (၁၀) ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံနေ့စဉ်သတင်းစာ
ခရိုင်းမီးယားကို ပထမဆုံး အကြိမ် ပူတင် ရောက်လာ
ကွာရှင်းရန် တရားရုံးသို့ လာရောက်ရာမှ တပ်မတော် တပ်ြ...
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ် ကုသဆောင်တွင် မှုခင...
စက်မှုဇုန် အလုပ်သမားဆန္ဒပြပွဲများ (ရုပ်/သံ)
မေလ (၁၀) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနေ့စဉ်သတင်းစာ
မေလ (၉) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာတိုင်း(မ်)ဂျာနယ် အတွဲ - ...